/ Ungawujikelezisa kanjani umbhalo ku-PowerPoint | Izindaba zeWindows
Siyaqhubeka ngezifundo eziyisisekelo ukuthola okuningi ku-PowerPoint. Namuhla ukuphenduka komsebenzi okusivumela shintsha ukuma kombhalo, ukuze ingakhonjiswa ngokuvundlile, engeza ukushintsha kwesethulo futhi, ngeshwa, ivimbele umamukeli ekuweleni isithukuthezi.
Into yokuqala okufanele uyikhumbule yile gwema ukushintshanisa imibhalo emide kakhulu, ngoba ungakhuthaza umamukeli wesethulo sethu ukuthi agweme ukuqina ukufunda umbhalo ojikelezisiwe, ngakho-ke kungakuhle ukuthi uwusebenzisele isihloko noma ukugqamisa izindawo zesethulo ezinamagama ambalwa.
Uma sesicacile ngalesi seluleko, sizokhombisa izinyathelo okufanele sizilandele ukushintshanisa imibhalo ku-PowerPoint.
Lapho sesivule isilayidi lapho umbhalo esifuna ukuwuzungeza utholakala kuwo, siwuchofoza kuwo khetha.
Phezulu kwebhokisi lapho umbhalo utholakala khona, umcibisholo oyindilinga okusimema ukuba siphendukise idokhumenti iye endaweni esiyifunayo.
Kumele nje sichofoze kulowo mcibisholo futhi shelela igundane kancane size sithole i-engeli efanele esifuna ukuthi umbhalo uboniswe.
Ngaleli bhokisi, ngeke sikwazi ukukhulisa usayizi wombhalo, ibhokisi nje kuphela lapho likhona. Uma sifuna ukukhulisa usayizi wefonti, kufanele sikwenze lokho ngezinketho zokuqala kwebhebhoni engxenyeni yeFonti futhi sandise usayizi wencwadi ize ifane nalokho esikufunayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zeWindows » General » Imihlahlandlela namathiphu » / Ungawujikelezisa kanjani umbhalo ku-PowerPoint